Xasan Cabdi Madar iyo Axmed Aw Geeddi
Riyaaq - Ciyaaraha iyo heesaha carruurta
n.a., Nayroobi, Kenya, 2009
ISBN: 9966-7059-4-5 -
Dhiganahan oo lagu soo ururiyey tiro door ah, inkastoo aanay ku dhammayn, oo heesaha iyo ciyaaraha carruurta ah, ujeeddada laga leeyahay waxa weeye in dib loo soo nooleeyo aqoontan oo la baro carruurta dhaqankii iyo noloshii ummadooda u gaarka ahaa si aanay ugu libdhin dhaqan aanay ab iyo isir u lahayn. Inkastoo heesahani ku salaysnaayeen dhaqankii miyiga iyo reer guuraaga haddana in badan oo ka mid ahi waa kuwo dib loo soo noolayn karo oo la jaanqaadi kara nolosha magaalada.
Dhinaca kale buugga ama dhiganaha waxa barbar socda cajalad maqal iyo muuqaal ah oo lagu daawan karo ama lagu dhegaysan karo aaladaha kombuyuutarka iyo Fiidyowga. Cajaladda waxa laga daawan karaa heesihii oo carruurtu qaadayso ama ciyaarihii oo ay ciyaarayaan.
Xasan Cabdi Madar waa qoraa buugaagtiisu ay sannadahan danbe wehel u noqdeen bulshada noocyadeeda kala duwan, muhiimad gaar ahna siiya reerka (carruurta, guurka, wada noolaanshaha). Axmed Aw Geeddi waa suugaan yahan heesihiisu ay madadaaliyaan ummadda wacyigelin badanna siiyaan. Labada qoraaba waxay deggan yihiin Hargeysa, Somaliland.
Akhriste - 2012-08-01 00:11:03
nimco - omin101@gmail.com
walaal sidee baan u helayaa buugan ama sidee baad iigu soo dirikartaan anoo maraykan jooga.
Akhriste - 2010-01-24 03:05:03
mahad - mahadrooble@hotmail.com
waad ku mahad sathiin soo daabacitaan kiina sheekadaan
Akhriste - 2009-08-23 08:24:30
cabdirixiim buuni - cbuuni5@gmail.com
buugan oo ah run-ahaantii buug aad iyo aad u qiiimo badan ayaa waxaa uu isoo xusuusiyay ciyaarihii iyo sheekooyinkii barigii aanu yar-yarayn taas oo aad iyo aad ugu qiimo badan bulshadeena dhexdeeda iyadoo imika ay meesha ka baxday ciyaarihii iyo sheekooyinkii baryihii hore la samayn jiray,waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa labada qoraa ee buugan qoray kuna xusan xalka sare Ee uu buugu ku yaal , waxaanan soo jeedin lahaa,in dadkeenan kalena aynu sidaas iyo si leeg u uruurino sheekooyinkeenii hore wslmc buuni